ရန်ကုန် မြင်ကွင်းကျယ် | MRTV-4
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၀၈.၀၁.၂၀၁၈
-The Pizza Company ၏ New Year Promotion ကံထူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲ
-Nay Lin Aung Finance & Accountancy Academy ၏ အောင်မြေသာစည် ကျောင်းခွဲသစ်ဖွင့်ပွဲ
-၁၉၇၅-၁၉၇၉ ခုနှစ်ဓာတုဗေဒ/ကုန်ထုတ်ဓါတုဗေဒကျောင်းသား ကျောင်းသူများ၏ န၀မအကြိမ်မြောက် ဆရာကန်တော့ပွဲ
၂၇ ကြိမ်မြောက် အာစရိယပူဇော်ပွဲ
သန်လျင် GTI ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဟောင်းများ၏ မြတ်ဆရာများအား ကျေးဇူးတုံ့ပြန် ပူဇော်ကန်တော့ပွဲ
အမေများအိမ်ရာ ငွေပဒေသာစိုက်ထူခြင်း အခမ်းအနား
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ၀န်ထမ်းဟောင်းများ တွေ့ဆုံပွဲ
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၀၆.၀၁.၂၀၁၈
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဂုဏ်ပြုလွတ်လပ်ရေး လှုပ်ရှားမှုရုပ်ရှင်ပြပွဲ
ဒုတိယအကြိမ်ဓာတုဗေဒ ဂုဏ်ထူးတန်းကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များ၏ အာစရိယပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနား
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော် မဟာရန်ကုန်တပို့တွဲခြင်းလုံး ကော်မတီ ၊ (၁၄)ကြိမ်မြောက် ခြင်းအလှခတ်ပွဲတော်
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၀၅.၀၁.၂၀၁၈
-ကလေးငယ်များ၏ (၁၄)ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ
-ရန်ကင်းပညာရေးကောလိပ် လေ့ကျင့်ရေးအလယ်တန်းကျောင်း သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ၊ လမ်းဖွင့်ပွဲနှင့် စုံညီပွဲတော်
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၀၄.၀၁.၂၀၁၈
-ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရူပဗေဒ ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများ၏(၇)ကြိမ်မြောက်အာစရိယပူဇော်ပွဲ
-Happy New Year 2018 Count Down Event
-အ.ထ.က(၁)အင်းစိန် ကျောင်းသားဟောင်းများ၏ မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ
-၁၉၈၄-၁၉၉၂ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဥပဒေကျောင်းသား/သူများ တတိယအကြိမ်အာစရိယပူဇော်ပွဲ
-Myanmar Mahar Htun Co.,Ltd 10 Year Anniversary Staff Party
-ဆဌမအကြိမ်လေးမြိုင်ဓမ္မပူဇာ စာပေဆုချီးမြှင့်ပွဲနှင့် ထေရ၀ါရ ဓမ္မစာမူဆုချီးမြှင့်ပွဲ
-လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဂုဏ်ပြုအငြိမ့်ဖျော်ဖြေပွဲနှင့် ရခိုင်ပညာရေးအလှူငွေပေးအပ်ပွဲ
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၀၂.၀၁.၂၀၁၈
-2nd General Annual Meeting of Mynamar Anatomy Society
-University Of Medicine(1) 2017 Batch Fresher Welcome
-အ.ထ.က ကမာမတ်ဒုတိယအကြိမ် အာစရိယပူဇော်ပွဲ
-ခရမ်းမြို့၊ အ.ထ.က(၁)၊ အ.ထ.က(၂) ကျောင်းသား/သူဟောင်းများ၏ (၂၆)ကြိမ်မြောက် အာစရိယပူဇော်ပွဲ
-နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မှော်ဘီ)ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲနှင့် ဆုပေးပွဲအခမ်းအနား
-ဧရာချမ်းသာ အဆင့်မြင့်ကွန်ဒိုမီယမ် ၀ယ်ယူထားသူများအားကျေးဇူးတုန့်ပြန်ခြင်း(၂၀၁၇) အခမ်းအနား
-Schneider Electric Laboratory Opening Ceremony
-ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် နှစ်ပတ်လည်မဂ္ဂဇင်း ၂၀၁၇ စာမူရှင် ဂုဏ်ပြုပွဲနှင့် အငြိမ်းစားပါမောက္ခ "ဒေါ်နုနုဖောင်ဒေးရှင်း" ပညာရေးသုတေသနဆုပေးပွဲ
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၀၁.၀၁.၂၀၁၈
-Taste of Korea
-MYANMAR COUNTDOWN 2018 (ကျိုက္ကဆံ)
-MYANMAR COUNTDOWN 2018 (MEP)
-iMyanmar House.com ရဲ့Sittwe Water Front Project စီမံကိန်း
-နဂါး နှစ်ကောင် အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်း RC- ၁ထပ်ကျောင်းဆောင်သစ်ဖွင့်ပွဲနှင့် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနား
-MYANMAR COUNTDOWN 2018 [ရန်ကုန်မြို့တွင်းပြည်သူများနှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုသည့်မြင်ကွင်း (၁)]
-MYANMAR COUNTDOWN 2018 [ရန်ကုန်မြို့တွင်းပြည်သူများနှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုသည့်မြင်ကွင်း (၂)]
-အ. ထ. က(၁) လသာ မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ ၊ လေးထပ်ကျောင်းဆောင်သစ်ကြီးဖွင့်ပွဲ နှင့် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနား
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၃၁.၁၂.၂၀၁၇
-ရွှေမြင့်မိုရ်ကျောင်းတိုက် - မိုးကုတ်ဝိပဿနာမိဘဂုဏ်ရည် သံဃာဝါသကျောင်းတော် အလှူတော်ငွေပေးအပ်ပွဲ
-အထက(၁)တောင်ဥက္ကလာပ ကျောင်းသား/သူဟောင်းများ၏ (၂၇)ကြိမ်မြောက် မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ
-၀ိသုံဂါမသိမ်ဓမ္မာရုံတော်ကြီး ရေစက်ချ အလှူတော်မင်္ဂလာ
-Project Poster Presentation and Talent Show Contest on Green Thinking Project
ဆရာဦးမောင်မောင်တီ(သင်္ခင်္ျာ) သင်္ခင်္ျာစာသင်သက်(၄၄)နှစ်မြောက်နှင့်၂၀၁၇ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ သချာင်္ဂုဏ်ထူးရှင်များ ဒဿမအကြိမ် (၁၀)ကြိမ်မြောက်ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲ
-အ.ထ.က (၁) လမ်းမတော်ယခင် ST.John's (၁၉၈၅-၂၀၁၀)ပညာသင်နှစ်ကျောင်းသား/ သူ ဟောင်းများ၏ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက်အာစရိယပူဇော်ပွဲ
- Dumex Dugro (so much more) နို့မှုန့်မှကျင်းပသော မိသားစုနှင့် ကလေးငယ်များအတွက် ဖျော်ဖြေရေးနှင့်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ
-Be the Change Myanmar Wedding Fair 2018 သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
-Wedding Fair 2018 သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
သာသနာ့ပျိုးဥယျာဉ် ဖောင်ဒေးရှင်း ထူထောင်ရေး သြ၀ါဒခံယူပွဲနှင့် ဖြစ်မြောက်နိုင်ရေး ဆန္ဒခံယူပွဲ
Media Gathering In Yangon ""Let's Make A Wish For 2018"" By Air Asia
Gong Cha Grand Opening Ceremony
Cosmetic Special Discount Festival 2017
Management Strategy for 2018 & Graduation Ceremony
Phyathai 1 &2Hospital and SM Tours & Transport Co.,Ltd. ""Thank You Party""
Suzuki Ciaz Club Myanmar ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပရဟိတအလှူ
Nay Lin Aung Finance & Accountancy Academy ၏ ထူးချွန်ကျောင်းသားများဆုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနားနှင့်(၂၁)နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ညစာစားပွဲ
ပဉ္စမအကြိမ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ စိန်မော့ပေသီးစိတ်တွက် သချာင်္ပြိုင်ပွဲ အခမ်းအနားနှင့် ထူးချွန်ကျောင်းသား/သူများဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပေးအပ်ပွဲ
Stand Out As An Effective Leader On The Challenging Market
KASEMRAD ဆေးရုံကြီးမြန်မာပြည်ရုံးချုပ် မိတ်ဆက်ပွဲနှင့်ကျန်းမာရေးအခမဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနား
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၂၅.၁၂.၂၀၁၇
Kembangan Medical Group ၏ Corporate Social Responsiblity
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၂၄.၁၂.၂၀၁၇
ဒုတိယအကြိမ်အောက်ဆီဂျင်အလှူတော် အဖွဲ့များတွေ့ဆုံပွဲနှင့် လှူဒါန်းပွဲ
မေတ္တာရှင်ရဲ့အစေခံခရစ်ယာန်အခမဲ့နာရေးကူညီမှုအသင်းမှစတုတ္ထအကြိမ် ခရစ္စမတ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနှင့် တတိယအကြိမ်သင်းလုံးကျွတ် အသင်းသားစုံညီပွဲ
Suzuki Ciaz Club MSCC Myanmar "OPENING"
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၂၃.၁၂.၂၀၁၇
(11/95, 11/96, 5/99, batch ရန်ကုန်ဆေးတက္ကသိုလ် (၂) ကျောင်းသား/သူများ၏ ပထမအကြိမ် စုပေါင်းဆရာကန်တော့ပွဲ
Community Leadership and Social Studies (CLASS)
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၂၂.၁၂.၂၀၁၇
Evening of Celebration(B)
Evening of Celebration (A)
MYANMARPLAS RRINT PACK AGROTEK FOODTEK
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၂၁.၁၂.၂၀၁၇
Soft Launching for Inernational Gateway & Signing Ceremony of Content Service
YOUTH International College YIC ၏ "Graduation Dinner"
YOUTH International College YIC ၏ "Graduation Ceremony"
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၂၀.၁၂.၂၀၁၇
Myanmar Influencer Awards 2017
HUAWEI Annual Media Thank You Party
မြန်မာနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးအိမ်ခြံမြေနှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်း အရောင်းပြပွဲကြီး
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၁၉.၁၂.၂၀၁၇
ဟေမာန်ဦး ဒီဇိုင်နာ Class School ၏ သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားနှင့် Fashion Show
Unbelild Of Our New Venture In Myanmar
Metro ITM Japanese Language Center ၏ ပထမအကြိမ် Diploma ဘွဲ့နှင်းသဘင်
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၁၈.၁၂.၂၀၁၇
အ.ထ.က -၁ (လသာ) ကျောင်းသားဟောင်းများ၏ အာစရိယပူဇော်ပွဲနှင့် မိတ်ဆုံစားပွဲ အခမ်းအနား
မိခင်နှင့် ကလေးများနေ့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ အခမ်းအနား
အ.ထ.က -၁ ကျောင်းသား/သူများ၏ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနား
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၁၆.၁၂.၂၀၁၇
ဆရာကြီးဒေါက်တာ မောင်မောင်ခ၏ ရာပြည့်မွေးနေ့ပွဲ အခမ်းအနား
(၂၂) ကြိမ်မြောက် AGTI ကျောင်းပေါင်းစုံအာစရိယ ပူဇော်ကန်တော့ပွဲ အခမ်းအနား
8th MSI World Wide Education Day
2017 ICTC Asian Yangon Regional Programming Contest
Brand Brain Study Camp-IV
Hitachi Soe Electric & Machinery Co.,Ltd. (HISEM) ၏ ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲ အခမ်းအနား
Vietnam Expo In Myanmar 2017 Press Conference
အ.ထ.က (၁) ပန်းဘဲတန်း စိန့်မေရီကျောင်း၏ သက်ကြီးအာစရိယပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနား
Noble Beauty Bussiness Group Co.,Ltd တို့၏ အရောင်းမြှင့်တင်ပွဲ အခမ်းအနား
Pro 1 Home Center Global's Thank You Party And Cotto's New Products Lauching
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၁၃.၁၂.၂၀၁၇
PENSHOPPE Grand Opening (City Mall St.John)
Switching On Of Myanmar's Tallest Christmas Tree Light
Joint Chambers Christmas Tree Lighting Party At Chatrium Hotel Royal Lake Yangon
HKTDC Outreach Seminar Cum Networking Luncheon
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၁၂.၁၂.၂၀၁၇
မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနား
ပန်းလေပြေ ဟိုတယ် မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား
Myanmar 4th Annual Event Communicast 2017
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြေတီဦး ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်း၏ (၈)ကြိမ်မြောက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ပွဲနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ အခမ်းအနား
နီနီရောဂါရှာဖွေရေးနှင့် အထူးကုဆေးခန်းတွင် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးပေးခြင်း အခမ်းအနား
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၁၁.၁၂.၂၀၁၇
MMRD Office Living Showroom Grand Opening
Stallion နှစ် (၂၀)ပြည့် ဒုတိယအကြိမ်ကံစမ်းမဲဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား
Leopalace 21 Myanmar Open 2018 စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား
Opening Ceremony Of Skyworth Show Room & Opening Ceremony Of Fusion-1 Restaurant & Bar
Myanmar Chemical Mart Co.,Ltd & RudolF Group (Germany) တို့ပူပေါင်း၍ Yangon Technological University ရှိ Textile Engineering ကျောင်းသား/သူများကို နည်းပညာ (Theoetical + Prectical )
Training သင်တန်းမြင်ကွင်းများနှင့် Textile Chemical များလှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနား
TOYOTA Road Safety Education Launch Ceremony
Christmas Tree Lighting and Tazaungdaing Festival
Nestle မှသံဓာတ်နှင့် အာဟာရလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးမည့် မုယောနို့ရည် မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား
"A Tavola" Italian Food Festival 2017
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၈.၁၂.၂၀၁၇
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဓာတုဗေဒ ကျောင်းသား/သူဟောင်းများ၏ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနား
ES4E Language & Training Centre ၏နှစ် (၂၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား
3rd Yangon Aikido Seminar 2017
Myanmar's Leading Property Show
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၇.၁၂.၂၀၁၇
သူနာပြုတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်) ကျောင်းသူ/သားဟောင်းများ၏ မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနား
ရွှေတိဂုံစေတီတော် ရခိုင်မောင်မယ် တံမြက်စည်းလှည်းအသင်း (၃၆) နှစ်ကာလ မောင်မယ်များ၏ မိတ်ဆုံညစာစားပွဲ အခမ်းအနား
Pride of Myanmar ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားမြန်မာ့စားသောက်ကုန်များ
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၆.၁၂.၂၀၁၇
10th Years Anniversary Of KOSE' Cosmetic မှ KOSE' Myanmar
Myan Water & Myan Energy 2017 Exhibition Grand Opening Ceremony
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၅.၁၂.၂၀၁၇
New Range Rover Velar Media Launching Ceremony
မြန်မာဘရူဝါရီလီမိတက် ဂရုဏာရှေးရှုမြန်မာမှု အစီအစဉ်၏ (၂၂)ကြိမ်မြောက် စုပေါင်းသွေးလှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနား
(၁၉) ကြိမ်မြောက်အထွေထွေ ရောဂါကု ဆရာဝန်များညီလာခံဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား
GAC MOTOR Myanmar Flagship 8-Series Launching Event
MEDEX'17 MYANLAB'17 Press Conference
ပဲနွယ်ကုန်း အသင်း၏ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးနှင့် သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ၊ ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၃.၁၂.၂၀၁၇
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ပန်းတဉ်းအာရုံတော်ဝတ်အသင်းကြီး၏ (၇၆)ကြိမ်မြောက် ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးအား ရွှေစင်ရွှေသား၊ ရွှေပြား သင်္ဃန်း - ၁၂၉ပြား၊ ရွှေအလေးချိန် ၁- ပိဿာ၊ ၂၉-ကျပ်သား လှူဒါန်းရေစက်ချမင်္ဂလာအခမ်းအနား
န၀မအကြိမ်မြောက် မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၏ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ညီလာခံ
မြန်မာ - တရုတ် ချစ်ကြည်ရေးအသင်းနှင့် Blue Sky Rescue တို့ပူးပေါင်း ဖွင့်လှစ်သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ် အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးသင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား
၁၉၈၄ - ၁၉၈၇ June Batch (ရန်ကုန် - မော်လမြိုင်) ၁၉၈၄ - ၁၉၈၆ (ရန်ကုန် - ပုသိမ်)၊ ၁၉၈၅ - ၁၉၈၈ January Batch NTC နှင့် ၁၉၈၆ - ၁၉၉၀ January Batch NTC သူနာပြု သင်တန်း သူ/သားများ၏ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနား
[work.com.mm ၏ မြန်မာ့ပထမဆုံးအခမဲ့ အရည်အချင်းစစ်ဆေးမှု (Competency Test) ပါဝင်သော အလုပ်အကိုင်ပြပွဲ Recruitment Day 2017 ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား
[work.com.mm ၏ မြန်မာ့ပထမဆုံးအခမဲ့ အရည်အချင်းစစ်ဆေးမှု (Competency Test) ပါဝင်သော အလုပ်အကိုင်ပြပွဲ Recruitment Day 2017 ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား (Part A)
တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ Kunming Medical University မှ မျက်စိအတွင်းတိမ် ကုသရေးအဖွဲ့ နှင့် ၀ိသာခါဖောင်ဒေးရှင်းတို့ ပူးပေါင်းသည့် အလင်းရောင်ခရီးစဉ် လှုပ်ရှားမှုတွင် မျက်စိအတွင်းတိမ်လူနာ (၁၂၀) ဦးအား အခမဲ့ခွဲစိတ် အလင်းဒါနပြု လှူဒါန်းသည့် ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား
အောင်သမာဓိ စိန်ရွှေရတနာဆိုင်မှ ရွှေပညာအခမဲ့သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၁.၁၂.၂၀၁၇
Victoria University နှင့် University Of Wolverhampton (UK) ၏ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် Bachelor Degree ဘွဲ့လက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနား
Myanmar Search International (MSI) နှင့် Taylor's University တို့ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနား
Music For Myanmar Charity Show
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၃၀.၁၁.၂၀၁၇
NIN2 Business Competition 2017 Final Pitch
အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေး (၁၆) ရက်တာ လှုပ်ရှားမှု မီဒီယာများသို့ အသိပေးမိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၂၉.၁၁.၂၀၁၇
Myanmar Women Art,Craft & Handmade Show
၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသားစာပေ တစ်သက်တာဆု၊ အမျိုးသားစာပေဆုနှင့် စာပေဗိမာန်ဆု ဆုနှင်းသဘင် အခမ်းအနား
Shop.com.mm ၏ Black Friday ဈေးရောင်းပွဲတော်
Study Abroad Information Centre မှကြီးမှူးကျင်းပသော Study In Kaplan Higher Education Academy ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကြီး
အမှတ် (၄) အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း (အင်းစိန်) သတ္တမအကြိမ်မြောက် အာစရိယပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနား
MW AQUA Solutions Co.,LTD Grand Opening
2018 VOIVO XC60 LAUNCHING Press Conference
Made In Thailand Buffet စတင်ရောင်းချခြင်း မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၂၇.၁၁.၂၀၁၇
Myan Auto 2017 and Bus and Truck Myanmar 2017
Scania Myanmar မှကျင်းပပြုလုပ်သော Top Team Competition 2017 Part-2
Scania Myanmar မှကျင်းပပြုလုပ်သော Top Team Competition 2017 Part-1
International Watercolor Society Myanmar 2nd Annual Exhibition 2017 & Atanur Dogan
OPPO F5 Youth Launching Ceremony
The Press Conference of Myan Build 2017 Myanmar's Biggest International Building and Construction Industry Show (အပိုင်း(၁))
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၂၅.၁၁.၂၀၁၇
သန်လျင်နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည့် AMEICC ၏ တက္ကသိုလ်အဆင့်ပညာဒါန သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား
အ.ထ.က -၂ (တာမွေ) ၂၅ ကြိမ်မြောက် ငွေရတုမြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနား
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၂၄.၁၁.၂၀၁၇
ChooseaCareer Choose HR Professional ဆွေးနွေးဟောပြောပွဲ အခမ်းအနား
အမှတ် - ၄ အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း (မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်)၏ ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် အာစရိယပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနား
အ.လ.က (၁) မရမ်းကုန်း (အောင်မေတ္တာ) ကျောင်းသား/သူဟောင်းများ၏ သတ္တမအကြိမ်မြောက် အာစရိယပူဇော်ပွဲ
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၂၃.၁၁.၂၀၁၇
St.Philomena's Convent နှင့် (၁၉၈၀) ပြည့်နှစ်အထိ အ.ထ.က (၂) စမ်းချောင်းတွင်ပညာသင်ကြားခဲ့ကြသော ကျောင်းသူဟောင်းများ၏ အာစရိယပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနား
Luminarc ၏ကုန်ပစ္စည်းသစ်မိတ်ဆက်ပွဲနှင့်အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း အစီအစဉ်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၂၂.၁၁.၂၀၁၇
6th Japan Expo 2017
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၂၁.၁၁.၂၀၁၇
The New 2018 ASX Launch Event Mitsubishi Motors
မြန်မာ့အမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (MCHT) နှင့် စိမ်းလန်းစိုပြေ ဂါးဒင်းတို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် မြန်မာ့ရိုးရာ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်
4th South East Asia Radiographes & Radiological Technologists Conference In Conjunction With 3rd, Vietnam-Myanmar Philippines Conference And 6th Myanmar Medical Radiation Technologists Conference
The National Day & Armed forces Day of the Republic of korea(Part-2)
The National Day & Armed forces Day of the Republic of korea (Part-1)
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် - ၂၀.၁၁.၂၀၁၇
(Krab House Seafood Restaurant Grand Opening)
Fukuoka Yangon Festival 2017 စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲ အခမ်းအနား
PREMIER Coffee (ရန်ကုန်) တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား
TALENT HIGHWAY Management Institute ၏ဒီပလိုမာ ဘွဲ့အပ်နှင်းပွဲနှင့် သင်တန်းမိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား
Good Morning မိသားစု၏ စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်အလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနား
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် (၁၉- ၁၁ -၂၀၁၇)
The 1st International Conference On Advanced Information Technologies ICAIT 2017
စာဖတ်ကြစို့ Let's Read Project ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား (အပိုင်း-၂)
စာဖတ်ကြစို့ Let's Read Project ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား (အပိုင်း-၁)
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် (၁၈ - ၁၁ -၂၀၁၇)
So Much More Road Show Of Dumex Dugro
Product Launch of CASIO Cash Register & Regi-Repo System
အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၏ တန်ဆောင်တိုင်မီးထွန်းပွဲတော်၊ နိဗ္ဗာန်ဈေးပွဲတော်နှင့် ဖျော်ဖြေရေးအခမ်းအနား
မှော်ဘီမြို့နယ် ကြိမ်ပိုက်ကျေးရွာ ရွှေမင်းဝံကျောင်းတိုက် မုခ်ဦးဖွင့်လှစ်ပွဲနှင့် ကထိန်သင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ အခမ်းအနား
CarsDB Auto Show 2017 Press Conference
ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်း သူနာပြုသင်တန်းကျောင်း အပတ်စဉ် - ၄၀ သူနာပြု သားဖွားဒီပလိုမာ အပ်နှင်းပွဲ အခမ်းအနား
One Championship Hero's Dream Open Workout
MCTC & MAGES Institute Of Excellence (Singapore) တို့ ပူးပေါင်းစီစဉ်ကျင်းပသော Concept Art For Game Demo Drawing Session
န၀မအကြိမ်မြောက် ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ဗဟိုစံပြငါးဈေး ဈေးသူ၊ ဈေးသားများ၏ စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန် အလှူမင်္ဂလာ အခမ်းအနား
အကယ်ဒမီ ဆွေဇင်ထိုက်အားပြင်သစ်နိုင်ငံမှ အနုပညာနှင့် စာပေဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဆောင် သူရဲကောင်းဘွဲ့ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနား
ပညာမြင့်မိုရ် ကိုယ်ပိုင် အထက်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကျောင်းသား/ သူများအား ဂုဏ်ပြုပွဲနှင့် ကျောင်းတွင်းပညာရည်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား
6th Japan Expo 2017 Media Press Conference
REAL Fitness Nation Day
Donation Of Carrier Hap Software
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် (၁၃ - ၁၁ -၂၀၁၇)
Nestle MILO & FC Barcelona Global Partnership
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် (၁၄ - ၁၁ -၂၀၁၇)
Gym - O -WEEN Halloween Party
Lucell Luxury Safes
မြန်မာနိုင်ငံ ဆရာဝန်အသင်းမှ (၃၅)ကြိမ်မြောက် ကျင်းပပြုလုပ်သော အသက် (၇၅) နှစ်ပြည့်ပြီး ဆရာဝန်ကြီးများအား“ပူဇော်ကန်တော့ပွဲ”
Launching Ceremony Of Aphaw ပြန်လည်မိတ်ဆက်ခြင်းအခမ်းအနား
ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ် အမှတ်-၃၄ စံပြရပ်ကွက် မိသားစုများ၏ (၁၇)ကြိမ်မြောက် နိဗ္ဗာန်ဈေးပွဲတော်ကြီး
မြန်မာနိုင်ငံ စီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန (MFPDSA)၏ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲနှင့် မိတ်ဆုံစားပွဲ
Online အခြေပြု Big -9TV မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား
The 2017 Myanmar Collegiate Programming Contest
မြန်မာနိုင်ငံ နံပါတ် - ၁ အကောင်းဆုံး အဆီကျဆေးကုမ္ပဏီ KALO မှ ပရဟိတအဖွဲ့များအား အလှူငွေပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနား
The Kamaz Golf Tour 2017
အ.ထ.က - ၁ (ဒဂုံ) ၂၀၁၇ ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ကြသော ကျောင်းသား/သူများအား ဂုဏ်ပြုဆုချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနား
Leadership Summit for Tech Age Girls Myanmar & Beyond Acess Innovative Library Award Giving
Korea Products & Sourcing Fair 2017
Indoor Skydiving Yangon Opening Ceremony
Sunday Foundation မှလှူဒါန်းသော လိုတရနှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်သစ်၏ ရေစက်ချအလှူတော် အခမ်းအနား
ဒဂုံတက္ကသိုလ် သင်္ချာဌာနမှ ကျောင်းသား/ သူဟောင်းများ၏ (၁၅)ကြိမ်မြောက် အာစရိယပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနား
စံနန်းထိုက်စာပေ၏ စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲနှင့် ရေးသူဖတ်သူ ဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနား
ဆေးတက္ကသိုလ်-၁ ကျောင်းသား/ သူဟောင်းများအသင်းမှ ကြီးမှူးပြီး ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ၀င်းအတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း
Anxen Enterprise pte Ltd,Anxen Myanmar Co.,Ltd JVC Kenwood Dealer Meeting and 2017 Product Launching Show
ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် (၆ - ၁၁ -၂၀၁၇)
Beauty Lover Company Limited Beauty Lover Seaweed Mask Product Launching
ရွှေမြင့်မိုရ် ကျောင်းတိုက်၏ မိုးကုတ်ဝိပဿနာ ဓမ္မရိပ်သာတွင် ဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်သော မိဘဂုဏ်ရည်သံဃာဝါသ ကျောင်းတိုက်ကြီးအတွက် ဒုတိယအကြိမ်အလှူတော်ငွေပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနား